सोधिने प्रश्न - TXJ अन्तरराष्ट्रीय कं, लिमिटेड
Activies / प्रदर्शनियों
पुराना पु कुर्सी
झुकेको ग्लास कफी टेबल
माटोको कफी टेबल
ग्लास कफी टेबल
MDF कफी टेबल
टिभी दृढ अडान
उत्पादनहरु कुन प्रकार मुख्य रूप सम्झौता TXJ?
हामी मुख्य रूप भोजन तालिका, भोजन कुर्सी र कफी टेबल उत्पादन। यी3वस्तुहरू धेरै निर्यात गर्दै छन्।
यसैबीच हामी पनि भोजन पीठ, टिभी-दृढ अडान, कम्प्यूटर डेस्क आपूर्ति।
आफ्नो न्यूनतम मात्रा के हो?
एक कन्टेनर देखि सुरु गर्दै। र3वस्तुहरू वरिपरि एक कन्टेनर मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ। कुर्सी लागि MOQ कफी टेबल 100pcs छ, 200pcs, टेबल 50pcs छ।
आफ्नो गुणस्तर मानक के हो?
हाम्रो उत्पादनहरु एन-12521, EN12520 परीक्षण पास गर्न सक्नुहुन्छ। र युरोपेली बजार को लागि, हामी EUTR आपूर्ति गर्न सक्छन्।
आफ्नो उत्पादन प्रगति के छ?
हामी विभिन्न उत्पादन कार्यशाला यस्तो MDF कार्यशाला, स्वभावका ग्लास प्रक्रिया कार्यशाला, धातु workshop.etc जस्तै, टेबल र कुर्सी लागि क्रमशः सेट।
TXJ गुणस्तर कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ?
हाम्रो QC र QA विभाग कडाई अर्द्ध-समाप्त देखि समाप्त सामान गर्न गुणस्तर नियन्त्रण। तिनीहरूले लोड अघि सामान निरीक्षण गर्नेछ।
तपाईँको ग्यारेन्टी नीति के हो?
हाम्रो उत्पादनहरु कमजोरीहरू निर्माण कवर एक वर्ष वारेन्टी बोक्न। वारंटी मात्र हाम्रो उत्पादनहरु को एक घर प्रयोग गर्न लागू हुन्छ। वारंटी नियमित वेयर र आंसू, प्रकाश, दुरुपयोग, दबाव वा सामाग्री को pilling, वा अपमानजनक लगाउन discoloration जोखिम कारण कवर गर्दैन।
आफ्नो लाभ वा विनिमय नीति के हो?
हाम्रो सामान सामान्यतया कम्तिमा एक ग्राहक गर्न कन्टेनर हुन्। हाम्रो QC विभाग लोड गुणस्तर ठीक आश्वस्त गर्न सामान निरीक्षण गर्नेछ अघि। त्यहाँ गन्तव्य बन्दरगाहमा एक पटक क्षतिग्रस्त धेरै वस्तुहरू छ भने, हाम्रो बिक्री टोलीले लागि बनाउन अप गर्न सबै भन्दा राम्रो समाधान पाउनुहुनेछ।
थोक सामान बनाउन सामान्यतया दिन वरिपरि 50।
भुक्तानी विकल्पहरू के हो?
टी / टी या एल / सी सामान्य छ।
जो पोर्ट तपाईं वितरण सामान देखि?
हामी उत्तर र दक्षिण उत्पादन आधार छ। टियांजिन पोर्ट देखि उत्तर कारखाना वितरण देखि सामान यसरी। र शेन्जेन पोर्ट देखि दक्षिण कारखाना वितरण देखि सामान।
तपाईं निःशुल्क नमूना आपूर्ति गर्न सक्छन्?
नमूना उपलब्ध छ र शुल्क TXJ कम्पनी नीति अनुसार आवश्यक छ। आरोप तपाईं गर्न पछि फिर्ता गरिनेछ गर्दा पुष्टि।
कति दिन यो नमूना बनाउन हुनेछ?
सामान्यतया 15 दिन।
प्रत्येक वस्तुको लागि CBM र प्याकेज वजन के हो?
हामी वजन, मात्रा र मात्रा 40HQ पकड गर्न सक्छन् भनेर सहित प्रत्येक कुर्सी लागि विशिष्टीकरण छ। कृपया इमेल वा फोन गरेर सम्पर्क गर्नुहोस्।
म धेरै टुक्रा मा तालिका वा कुर्सी किन्न सक्नुहुन्छ?
हामी भोजन कुर्सी लागि MOQ छ र साना मात्रा छैन उत्पादित गर्न सकिन्छ। कृपया बुझ्छु।
को कुर्सियों र टेबल पूर्व-भेला गर्दै हुनुहुन्छ?
निर्भर आफ्नो आवश्यकता मा। सामान्यतया ग्राहक आवश्यक यसलाई तल ढकढक्याउन प्याक, केही पूर्व-भेला हुन सक्छ। तल ढकढक्याउन प्याकेज थप 40HQ मा राख्न सकिँदैन र यसलाई थप आर्थिक छ भन्न छ थप स्थान सुरक्षित गर्नेछ। र हामी दफ्ती मा संलग्न विधानसभा निर्देशन छ।
यस दफ्ती को गुण के हो? कि धेरै बलियो हुन सक्छ?
हामी सामान्य गुणस्तर मानक 5-पत्र नालीदार दफ्ती प्रयोग गर्नुहोस्। पनि हामी थप बलियो छ जो आफ्नो आवश्यकता, प्रति मेल आदेश प्याकेज आपूर्ति गर्न सक्छन्।
तपाईं एक शोरूम छ?
हामी Shengfang र Dongguan कार्यालय मा शोरूम तपाईं हाम्रो भोजन तालिका, भोजन कुर्सी, कफी टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ छ।
ढुवानी लागत लागि कति?
यसमा जहाँ गन्तव्य पोर्ट छ, विस्तृत जानकारीका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् निर्भर गर्दछ।
म जडान समस्या वा प्राविधिक कठिनाइ छ भने के मेरो अर्डर हुन्छ?
प्रत्येक दफ्ती मा, हामी भित्र विधानसभा निर्देशन राख्न तपाईं उत्पादन इकट्ठा मदत गर्नेछ। तपाईं अझै पनि कुनै प्रश्न छ भने गर्दा, हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ।
म एक TXJ फर्नीचर सूची मलाई पठाइएको हुन सक्छ?
उत्पादनहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा पूर्ण स्रोत हाम्रो वेबसाइट छ। हामी वेबसाइट कुनै पनि समयमा मा नयाँ उत्पादनहरु अद्यावधिक गर्नुहोस्।
MDF कफी टेबल , Uk उचित पु भोजन कुर्सी , Vintage पु भोजन कुर्सी , ग्लास कफी टेबल, MDF तालिका , पु कुर्सी ,
Xinzhang क्षेत्र, Shengfang टाउन, Bazhou शहर, Hebei, चीन 065701 विकास